Uhambo lwami nokuthikamazeka kobuchopho – Bayede News
Uhambo lwami nokuthikamazeka kobuchopho
Ngikhumbula ngikhala, kuba mnyama amehlo, ngifisa ukuphuma egumbini likadokotela, kwazise izindaba engangiqeda ukuzizwa zazingaqondakali kimina.
Posted on 6 December 2019 6 December 2019 by nguSbonga Zungu
Sihlezi ezindlini zikadokotela, silinde ithuba lethu lokubonana nodokotela. Bayangena, bayaphuma abazali nezingane zabo. Abanye baphuma nezinyembezi emehlweni, abanye bayamamatheka, kanti abanye abafundeki. Ukulinda kwethu kwaba ngokude ngendlela eyisimangaliso ngenxa yokungazi ukuthi silindwe izindaba ezinjani ngaphakathi. Lapho, uNkanyezi ugcwele injabulo yobungane, uyagxumagxuma yedwana, akakhathazwe lutho. Impilo kuyena imnandi. Uneminyaka emihlanu vo, ngakho alukho olumkhathazile.
Ngikhumbula ngikhala, kuba mnyama amehlo, ngifisa ukuphuma egumbini likadokotela, kwazise izindaba engangiqeda ukuzizwa zazingaqondakali kimina. “Ngiyaxolisa, uNkanyezi une-Autism Spectrum Disorder (ASD), kanye ne-Attention Defi ciency Hyperactivity Disorder (ADHD)”. Lawa kwakungamazwi ashiwo ngudokotela, naba yisiqalo sokuguquka kwempilo yethu.
Ngokosolwazi, njengokubalula kwe-American Psychiatric Association (2019), i-Autism Spectrum Disorder (ASD) idalwa ukuphazamiseka okuthize engqondweni okuholela ezingqinambeni ngenkulumo, ulimi, ukuhlanganyela nabanye, kuphinde kubonakale ngezimpawu zokuhlala wenza into eyodwa. Kanti i-ADHD yona, njenge-Autism ibangwa wukusebenza kobuchopho okuphazamisa ukugxila kokuthile, ukukwazi ukuhlala phansi isikhathi eside ngaphandle ngokufi sa ukunyakaza kanye nokwehluleka ukulawula umzimba. IWorld Health Organisation (WHO) (2019) ibika lokhu okulandelayo ngezibalo zomhlaba jikelele mayelana ne-Autism: Eyodwa ezinganeni ezili-160 une- Autism Spectrum DisorderIhlasela kakhulu abesilisa kunabesifazane I-ASD iqala ukubonakala ebuganeni iqhubeke kuze kube sebudaleni.
Nakuba ingelapheki, izinhlelo ezesekwa wucwaningo zisiza kakhulu ekubeni abantu abane-ASD bakwazi ukuphila ngaphandle kokudinga usizo lwabanye abantu ukwenza imisebenzi yansuku zonke.
Kusukela eneminyaka emibili, uNkanyezi wayesekhombisa izimpawu zokungakhuli ngendlela elindelekile, ngokweminyaka yakhe kanye nobubulili. Lezi zimpawu zabonwa nguthishanhloko wenkulisa ayefunda kuyo ngaleso sikhathi nokwaphoqa ukuthi singene siphume kodokotela kanye nabelaphi ngohlelo (therapists) abehlukahlukene, sizama ukuthola ukuthi yini esibhekene nayo. Ngenxa yobuncane (ngeminyaka) bakhe ngaleso sikhathi, kwakunzima ukuthi odokotela badalule ukuthi yini anayo uNkanyezi.
Odokotela baseluleka ukuthi silinde aze abe neminyaka emihlanu ukuze bakwazi ukusitshela izindaba eziqondile. Ngenxa yobubanzi bayo (spectrum), i-Autism Spectrum Disorder (ASD) ivela ngezindlela ezahlukene ezinganeni. KuNkanyezi, izingqinamba esabhekana nazo kwakungukusilela emuva kolimi nenkulumo; engakwazi ukuhlala nabanye, wayeqoka ukudlala yedwa kakhulu kunokuhlanganyela nezinye izingane; umkhuba wokuphindaphinda into eyodwa, ayekuveza ngokugxuma kaningi; ukuthanda kakhulu okuthile kuphela, wayethanda ukulalela umculo wokholo, izinombolo, ubuchwepheshe, kanye nezinamba zokubhaliswa kwezimoto. Nakuba zisekhona lezi zimpawu kuyena namanje, eminyakeni eli-12, indlela yokwenza iyaguquka ngenxa yokukhula. Isibonelo: ukugxuma useyaqonda ukuthi kunezindawo okungamukelekile ukuthi akwenze kuzona, njengasenkonzweni nasekilasini.
Ezinye zezeluleko zami kubazali abaningi (abanezingane ezinezidingo ezikhethekile) engihlangana nabo ukuthi kubalulekile ukubeka izidingo zomtwana phambili, kanye nokwenza ucwaningo olunzulu ngesimo umtwana abhekene naso. Ukwenzenjalo kwenza ukuthi ukwazi ukunikeza umtwana uxhaso aludingayo nokuzifundisa wena qobo, njengomzali ngezindlela zokubhekana nesimo. Emva kokuthola izindaba zokuthi uNkanyezi une-Autism kanye ne-Attention Defi ciency Hyperactivity Disorder (ADHD), nganquma ukufundela iziqu emkhakheni wePshychology ukuze ngibe nolwazi olunzulu ngezimo ezithinta ingqondo, izimpawu zawo, indlela abantu abakulezi zimo abenza ngayo izinto kanjalo nezindlela zokubasiza. Lokhu kwaba isinqumo engingazisolanga ngaso neze, ngenxa yolwazi engaluthola ekufundeni kwami.
Ohambeni lwethu noNkanyezi, ne-Autism kanye ne-ADHD, kuningi esikufundile. INingizimu Afrika isasilele emuva kakhulu ngokocwaningo ngalolu hlobo lokuthikamezeka. Iningi lezinhlelo ezilandelwayo zokwelapha, zisungulwe emazweni angaphandle, njenge-Applied Behaviour Analysis (ABA), kanye nezinye. Isimo sezemfundo ebhekelela abantwana abanalezi zidingo sisasilele emuva kakhulu. Ngenxa yobuningi babantwana abadinga izikole ezikhethekile, ezikole azanele ukufeza izidingo zabo.
Kungenxa yalesi sizathu ngaze nganquma ukusungula isikhungo semfundo esizobhekelela abantwana abanezidingo ezikhethekile (remedial tuition centre), ngokugxila ku-Autism Spectrum Disorder kanye nakunye ukuthikamezeka okuncike kuyona. Ngokuhlanganyela ne-Equation Educators, iNkanyezi Tuition Centre (eqanjwe egameni likaNkanyezi Zungu) isiqalile yemukela abafundi kaba Grage R kuya kuGrade 7, abazoqala ukufunda ngoMasingana ngowezi-2020. Lesi sikhungo sizinze eGlen Austin, eMidrand, eGauteng, nakuba kunezinhlelo zokusabalala nakwezinye izifundazwe zaseNingizimu Afrika ngokuhamba kwesikhathi.
Posted in iBayede Kuleli Sonto, Inkundla Yabantu, IzindabaTagged NguSbonga Zungu